Ikhaya » Iindaba zokuHamba » Iimbadada Iilwandle kunye neeholide zokuthengisa iHalloween
Njengoko sisipho esincinci seendwendwe zabakhenkethi, Iimbadada Iilwandle kunye neeholide Ukuthengiswa kweHalloween kunika isidlo sangokuhlwa sangasese sangokuhlwa sangokuhlwa. Izibini ziya kuhlala etafileni ezihonjiswe ngokukodwa ngamalungiselelo eentyatyambo zetropiki kunye nokukhanya kwamakhandlela.
Isidlo se-gourmet esineekhosi ezine siya kuhanjiswa yiweyitala kwaye kuya kubandakanya ibhotile yeRuffino Prosecco kunye nokugalelwa okungenamda kweewayini zikaRobert Mondavi Twin Oaks®.
Zonke iindwendwe kufuneka ziyenze kukhetha indawo ezikhethiweyo ukuba zithathe inxaxheba kolu lonwabo lokutya.
Ifumaneka kwiziqithi zeAntigua, iBahamas, iBarbados, iGrenada, iJamaica, kunye ne-Saint Lucia, iindwendwe zinokubhukisha, zibhalise kwaye zihlole:
Iimbadada Grande Antigua
Iimbadada Emerald Bay
Iimbadada iRoyal Barbados
Imbadada Regency La Toc
Iimbadada iHalcyon Beach
Iimbadada Grande St. Lucian
Iisanda zeOchi Beach Resort
Iimbadada kuNxweme oluseMazantsi
Iimbadada Royal Caribbean
Iimbadada zeMontego Bay
Iimbadada Royal Plantation
Esi sidlo sangokuhlwa sangokuhlwa sesibane sasimahla siyafumaneka xa ubhukisha ubusuku obu-6 obuhlawulelweyo okanye nangaphezulu. Iindwendwe kufuneka zibhalise ukubhukisha kwazo ukuze zifumane lo mnikelo wesidlo sangokuhlwa kwifom yobhaliso engeniswe ngaphakathi kweeyure ezingama-72 zokubhukisha.
Iindwendwe esele zibhukishiwe - ungoyiki! Banokulisebenzisa eli thuba ngokubhalisa.
Ukusukela ngoku xa iindwendwe zifika kwiindawo zokuphumla ezinesikhululo seenqwelomoya, ukuya kumava okuphumla, iiSandals zifuna ukuba iindwendwe zabo ziziva zikhuselekile kwaye ziyonwabele iholide yasimahla. Ngaphandle kwento eyenzekayo kwihlabathi namhlanje, iindwendwe zinokuyekelela zisazi ukuba iProtocol yePlatinum yoCoceko iyasebenza kuzo zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide.
Ungoyiki… incwadi kunye neelwandle zeSandals kunye neeholide kwaye ubamkele bakwamkele kwiparadesi.